अमेरिकाबाट आयो दुखद खवर ! नेपाली युवती १९ वर्षिया नेहाको कस्तो छ अवस्था ? – Dailny NpNews
अमेरिकाबाट आयो दुखद खवर ! नेपाली युवती १९ वर्षिया नेहाको कस्तो छ अवस्था ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आषाढ २९, २०७८ समय: ९:३७:१०
अमेरिकाको टेक्सासमा भएको कार दुर्घ टनामा १९ बर्षकी नेहा भुसाल गम्भि”र घाइ”ते भएकी छिन् । नेपालमा बुटवल घर भई अमेरिकामा मिसिगनमा बसोबास गरी हाल टेक्सासमा बस्दै आएका प्रेम भुसालकी सुपुत्री नेहा कार दुर्घ टनामा घाइते भएकी हुन् ।
नेहाको गोडामा गम्भि र चोट लागेको जनाइएको छ । मिसिगनबाट विपिन श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुशार उनको हाल आईसीयुमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ ।
उनको इन्सुरेन्सले उपचार खर्च नधान्ने भएकाले सहयोगको आवश्यकता परेको जनाइएको छ । नेहाको उपचारका लागि ठूलो धनराशी लाग्ने भएकाले उपचारमा सहयोगका लागि गोफण्डमीमार्फत अभियान चलाइएको छ ।गोफण्डमीमा संकलित सबै रकम नेहाको सर्जरी, औषधी र मेडिकल बिलमा खर्च गरिने जनाइएको छ ।
अब अमेरिका इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट आइसले गर्भवती, सुत्केरी र स्तनपान गराउने महिलालाई सामान्यतया पक्राउ नगर्ने र हिराशतमा नराख्ने भएको छ ।
बाइडेन प्रशासनले अध्यागमन अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिदै गर्भवती आप्रवासीहरुलाई पक्राउ गर्ने कामलाई प्राथमिकता नदिन भनेको हो ।कानूनी रुपमा पक्राउ गर्नैपर्ने र अपवादका मामलाहरुमा बाहेक अब गर्भवती र स्तपान गराउने आप्रवासीहरुलाई पक्राउ नगरिने जनाइएको छ । शुक्रबार संसदीय कर्मचारीहरुलाई पठाइएको मेमोमा यो नीतिबारे उल्लेख गरिएको छ ।
पक्राउ गर्नैपर्ने अवस्थामा उनीहरुको उचित हेरचाहको बन्दोबस्त गर्न निर्देशन दिइएको छ । मेमोमा लैंगीक तटस्थताको भाषा प्रयोग गरिएको छ । जसका कारण तेश्रो लिंगीहरु प्नि समेटिएको जनाइएको छ ।
सुत्केरी भएको एकबर्ष ननाघेकाहरुले यस्तो छुट पाउने भएका छन् । पहिले नै हिराशतमा रहेकाहरुकोबारेमा पनि हिराशतमा निरन्तर राख्ने वा नराख्नेबारे मूल्यांकन गरिने जनाइएको छ ।बाइडेन प्रशासनको नीतिले सन् २०१७ को ट्रम्प प्रशासनको मेमोलाई उल्टाएको छ । ट्रम्प कालिन नीतिका कारण अहिले पनि हिराशतमा लिइएका महिलाहरु गर्भवती भए नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
ट्रम्पकालमा सन् २०१८ मा २०९८ जना गर्भवती महिलाहरुलाई हिराशतमा लिइएको थियो भने ३८१ जना स्तनपान गराइरहेका महिलाहरुलाई हिराशतमा लिइएको थियो ।